PressReader - Ilanga: 2019-01-10 - Kuboshwe uthisha 'odlwengule' umfundi (16)
Kuboshwe uthisha 'odlwengule' umfundi (16)
U-R20 000 nezicathulo zesikole ezingu-200
Ilanga - 2019-01-10 - Front Page - SKHOSIPHI MTHEMBU [email protected]
ZIMKHALELE ephuma nje emagcekeni esikole ngoLwesibili ekuseni, uthisha waseMqhawe Secondary School, eNanda, osolwa ngokudlwengula umfundi (16) ngoZibandlela (December) maqede wamvala amehlo wayomlahla ngakubo.
Kuthiwa uthisha uluthe lo mfundi ngokuthi kukhona afuna amsize ngakho, kanti uzomthatha ayomdlwengulela komuye umuzi. Kubikwa ukuthi into esolise umndeni wukuthi lo mfundi ubuye sesidlulile isikhathi kubo, okuyinto angajwayele ukuyenza.
Unina womfundi - esingeke simdalule ukuvikela indodakazi yakhe - uthe bewumndeni bese belala obenyoni njengoba lo thisha esabise ngokuthi uzoyibulala indodakazi yakhe uma ike yakhuluma.
Uthi indlela isimo esibi ngayo, indodakazi yakhe ike yazama nokuzibulala ngokuphuza umanyazini.
"Umhla ka-10 kuZibandlela, bekuwusuku lokuyolanda imiphumela. Neyami indodakazi iyile esikoleni okuthe isiyitholile, yabizwa yilo thisha ngoba ethi kukhona afuna imlekelele ngakho. Ngokuhlonipha uthisha, iyile kuyena wangena nayo emotweni baqala ngokushiya omunye uthisha lapho abezogibela khona.
"Ucele ukuba imphelezele ngoba ethi bayothenga inyama. Endleleni uyinike isiphuzo esiyisikhuthazimzimba.
"Emuva kwalokho, indodakazi yami ithi kayazi ukuthi kwenzekeni, ize yaphaphama ikwelinye igumbi lokulala inqunu, kunegazi nasemathangeni. Ithi uqhamukile lo thisha ephethe ithawula elimanzi wayinikeza ukuba izesule maqede wayivala amehlo.
"Uze wayivula amehlo sebedlula ngasesikoleni, wazoyishiya ngasekhaya. Ithi uyisabise ngokuthi uzoyidubula uma ike yabikela abantu ngalokhu,” kusho yena.
Uthi ngesikhathi ifika indodakazi yakhe, ibatshele ukuthi iphuma kumngani wayo, okuthe uma eshayelwa ucingo, wayilandula. Ize yabhoboka kwesinye isihlobo sayo ngokuyehlele.
"Selokhu kwenzeke lesi sigameko, indodakazi kayikutholi ukuphumula, nathi lapha ekhaya siyesaba. Uma kuhwalala siyabikelwa njengoba ithi lo thisha usabise ngokuthi uzoyidubula uma ike yakhuluma," kusho unina womfundi.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthi umnyango uzwile ngalolu daba futhi bayathokoza uma amaphoyisa esewenzile umsebenzi wawo, kanti naye uthisha uzothola ithuba lokuziphendulela ngalokhu asolwa ngakho.
“Njengoba eseboshiwe nje, nathi ngaphakathi sizoqala uphenyo ngaphambi kokuba kuthathwe izinyathelo,” kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi kuboshwe umsolwa oneminyaka ewu-33 ngecala lokudlwengula, kulindeleke ukuba avele maduze enkantolo.